Onye bụ Francisco Del Rosario Sanchez, bụ nna nke nnwere onwe nke Santo Domingo? - Afrikhepri Foundation
Wụnye Ngwa mgbakwunye : Iburu ihe ngosi chọrọ WooCommerce ngwa mgbakwunye.
Tọzdee, Ọgọst 6, 2020
Francisco del Rosario Sánchez, amụrụ na Machị 9, 1817 na Santo Dominguo ma gbagbue ya na Julaị 4, 1861 bụ onye ọka iwu na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị si Hispaniola, onye ọrụ mmekọrịta, ya na Juan Pablo Duarte na Ramón Matías Mella, nke Republic ugbu a. Dominican. Ha ato bu Padres de la Patria (nna nna). Ọ gara nke ọma Juan Pablo Duarte y Diez, na ọgụ maka nnwere onwe n'oge ije biri na ya wee kwupụta nnwere onwe nke Dominican Republic na 27th nke February 1844.
Francisco mụrụ Roser Sánchez mụrụ na Santo Domingo na Machị 9, 1817. A kpọrọ nna ya Narciso Sánchez Ramona na nne ya ka akpọrọ Olalla del Rosario de Belén Fernández, ọ bụ onye Afro. Ndị mụrụ ya alụghị di na nwunye mgbe amụrụ ya. Francisco bụ ọkpara n’ime ụmụaka iri na otu, nke otu n’ime ha, Socorro Sánchez guzobere onwe ya dịka onye nta akụkọ. Sánchez bụ kwa nwa nwanne na ntinye aka nke María Trinidad Sánchez.
Nke nne ya gụrụ akwụkwọ na mbụ, ọ mechara bụrụ onye na-eso ụzọ onye ụkọchukwu Peruvian Gaspar Hernández, onye zụlite mmụọ ịhụ mba n'anya. Ọ bụ ezie na ọ kụziri onwe ya, ọ maara asụsụ French na Latin, nwee ọdịbendị dị ukwuu ma gosipụta onwe ya na arịrịọ ọ bụ ọkàiwu.
Ọ bụ onye depụtara ihe ngosi maka nnwere onwe nke Jenụwarị 16, 1844 ezigbo omume nnwere onwe wee bụrụ onye mbụ na-etinye ọkọlọtọ mba Dominican na February 27, 1844.
E jidere ya na ntinye nke El Cercado ebe o merụrụ ahụ, a na-ebuga ya San Juan de Maguana ebe a mara ya ikpe ọnwụ ma gbaa ya na July 4, 1861 ya na ndị otu ya 20 dị elekere anọ na elekere anọ nke elekere. Ihe odide ya na ndị nke nna abụọ nke Nna Juan Pablo Duarte na Ramon Matias Mella nọ na ebe nkwakọba okwu “ebe ịchụ aja nke Nna” dị na ogige nnwere onwe dị nso na Puerta del Conde ebe ekwusara. onwe. A malitere ụlọ-ncheta a na February 27, 1976.
Sanchez mụrụ ụmụ nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị, Felicita Martinez nke mbụ, ya na Monica mụrụ. Mgbe afọ ole na ole gachara, Maria Hinojosa Evarista (Goyita) na Marie Gregoria. Mgbe ahụ, ya na curaçaoannaise Leoncia Leydes Rodríguez ọ nwere Léoncia. N'ikpeazụ, ọ bụ nna Petronila na nne Mercedes Pembrén Chevalier. Alụrụ nwunye na Eprel 4, 1849 na Balbina Peña Pérez, onye nyere ya ụmụ nwoke abụọ Juan Francisco na Manuel de Jesús. Mgbe e mesịrị Juan Francisco ghọrọ onye minista na-ahụ maka ego na gọọmentị Ulises Heureaux ma sonyere na ntuli aka nke Onye isi ala Carlos Morales Languasco.
Kedu ihe ị chere ?x
Atiya Ịgba ohu
AfricaShows (Youtube ọwa)
Comingghọta - Michelle Obama
Pịa n'okpuru iji kwuo
30 agobọchị gara aga
" GỤKWUO »
Pịa n'okpuru ka idenye edemede